I-Country Chalet ene-Hot Tub & Indoor Jacuzzi
Kensington, Prince Edward Island, i-Canada
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Jill
Qala uhambo lwakho olulandelayo ku-Cozy Riverview Chalet yethu. Igumbi elihle lokulala eli-2 lesitayela se-chalet cottage elibekwe endaweni enyakazayo ye-PEI, elinompheme ozungeza uvulandi ohlinzeka ngezindawo zokuphumula nezokudlela. Igceke elinelanga linobhavu oshisayo oyimfihlo, itafula lepikiniki nendawo yokubuthana, indawo yokucima umlilo, kanye nevulandi yeleveli yesibili ephuma ekamelweni eliphambili elilungele ubusuku bokubuka izinkanyezi kanye nengilazi yewayini.
I-Riverview Chalet iyindawo ebalulekile yokubalekela ngaphandle. Imizuzu nje ukusuka e-Prince Edward Islands amapaki namabhishi aheha izivakashi.
Ilungele ukuzijabulisa komndeni, i-kayaking, izindawo zokuhlala zokudoba, noma izindawo zothando.
Le ndawo yokuhlala yesimanje inakho konke okudingayo ukuze uzizwe usekhaya. Jabulelani ukudla kwenu ndawonye etafuleni legumbi lokudlela, noma nikuyise egcekeni niyokwenza izoso eyingqophamlando.
Ngemva kosuku olujabulisayo lokuzidela, hlanganani egumbini lokuphumula nizodlala ubusuku befilimu, nizitike nge-jacuzzi yasendlini, noma nilungele ukuthatha isibhakabhaka esicwathile esigcwele izinkanyezi ezikhazimulayo ezivela kubhavu oshisayo ongaphandle— kungakhathaliseki ukuthi ubusuku obubandayo basebusika noma kusihlwa sasehlobo esisha.
Amalungiselelo okulala ahlanganisa igumbi lokulala lesitayela esiphezulu se-loft elinombhede wendlovukazi, ikamelo lokulala lesibili langasese elinombhede owodwa wendlovukazi, kanye ne-queen sleeper sofa e-Livingroom.
Isikhathi sokuzidela ngale kwe-Riverview Chalet? Unokukhetha okuningi. Ukudoba olwandle olujulile, i-kayaking, ukuzulazula phezu kwamanzi, ukugxuma kwebhuloho, Ipaki Yokuzijabulisa Yomndeni eShining Waters, ipaki yokuzijabulisa yaseSandspit, i-Anne yama-green gable, ukuthenga, ukudla, igalofu, nokunye okuningi! Kukhona okuthile kwawo wonke umuntu eqenjini lakho. Yisho umsebenzi wakho weholide oyintandokazi, futhi cishe uzowuthola lapha!
Impela i-PEI eyi-quintessential yokubaleka. I-Riverview Chalet iyisisekelo esihle sasekhaya sokuhlola ubuhle obuningi bale ndawo ekhethekile! Sithemba ukukubona maduze
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$793.